MSF oo doonaysa baaritaan danbi dagaal - BBC Somali
MSF oo doonaysa baaritaan danbi dagaal
Image caption Isbitaalka MSF ee Kunduz ayaa ku burburay weerarka.
Hayadda gargaarka caafimaadka ee MSF ayaa sheegtay inay doonayso Gudiga Caalamiga ee Xaqiiqa Raadiska ah ee hoos yimaada heshiiskii Geneva (Geneva Convention) inuu baaro weerarkii Maraykanka uu ku qaaday isbitaalkooda magaalada Kunduz ee Afganistan.
Madaxweynaha Hayadda, Dr Joanne Liu, ayaa sheegay in weerarka oo dilay toban bukaan iyo laba iyo toban shaqaalaha MSF, inuu ahaa weerar lagu qaaday heshiiskii Geneva ee masuulka ka ah sida loo dhaqmo dagaalka.
Dr Liu, ayaa sheegay sida ay isku badalayaan hadalka ka soo baxaya Maraykanka iyo Afghanistan inaan la aamini karin milatariga dhexdiisa inay baaritaan sameeyaan.
Talaadadii, taliyaha ciidamada Maraykanka ee Afghanistan ayaa sheegay weerarka inuu qalad ahaa.